[အရွယ်အစား]- အလျားနှင့် အနံကို ပုံသေသတ်မှတ်ထားပြီး အမြင့်ကို လိုအပ်သလို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
သင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားများကို ရနိုင်ပါသည်။
[အရောင်]- မည်သည့် ဒီဇိုင်းနှင့် လိုဂိုကိုမဆို သွပ်သေတ္တာ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သင်လိုအပ်သလို CMYK သို့မဟုတ် PMS ဖြင့် ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါသည်။
[Coating]- အကာအကွယ်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော တောက်ပြောင်သော သို့မဟုတ် ဖျာဖြင့် ပြီးသည်။
[ထုပ်ပိုးခြင်း]- သံဖြူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကာကွယ်မှုအရ Pallet အတွက် ကတ်တွန်။
[MOQ]: 5000 ~ 25000pcs အရွယ်အစားအလိုက်။
[စိတ်ကြိုက်နမူနာဦးဆောင်အချိန်]: ရှိပြီးသားမှိုအတွက်7~ 10 ရက်
ပုံဆွဲမှို၏အတည်ပြုချက်နှင့်မှိုအခကြေးငွေလက်ခံရရှိပြီးနောက်မှိုအသစ်တစ်ခုအတွက် 15-20 ရက်
[ထုတ်လုပ်မှုဦးဆောင်အချိန်]: နမူနာကိုအတည်ပြုပြီးနောက် 25 ~ 30 ရက် သို့မဟုတ် အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပါသည်။
[Delivery Term]- EXW၊ FOB သို့မဟုတ် CIF
[ငွေပေးချေမှုကာလ]- T/T ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု 30%၊ လက်ကျန်ပမာဏကို ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ပေးချေပါသည်။
[လက်မှတ်]-Coca Cola၊ SEDEX တိုင် Disney၊ SA8000၊ISO9001၊ISO14001၊BRC၊NBCUniversal၊ စသည်တို့၊
[သံဖြူထုပ်ပိုးခြင်းကို ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ပါ]- ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသော ထုပ်ပိုးမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သံဖြူထုပ်ပိုးခြင်းကို ရွေးချယ်ကြသည်။အောက်ပါတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏကြားနေရသည့်အရာများဖြစ်သည်-
1. ဒုတိယထုပ်ပိုးမှုမလိုအပ်ဘဲ လက်ဆောင်အထုပ်
2. တံဆိပ်တပ်ခြင်း၊ စုဆောင်းနိုင်မှု၊ ပိုမိုမြင့်မားသော တန်ဖိုးထားမှု
5. 100% ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
6. ပြိုင်ဖက်များ ပြည့်ကျပ်နေသော ကွင်းထဲတွင် မျက်လုံးကို ဖမ်းစားပါ။
[အားသာချက်]- သင်၏ ပေးသွင်းသူအဖြစ် ကုန်းလမ်းမှ ရွေးချယ်ရန် အကြောင်းရင်း လေးချက်-
- ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံ 15 နှစ်အထက်ရှိရမည်။
- အရည်အသွေးနှင့် အချိန်မီ ပို့ဆောင်မှုအာမခံချက်အတွက် အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ၅ ခု။
- ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း၊ ရုပ်ရှင်ထွက်ရှိမှု၊ 3D ရုပ်ပုံနှင့်ထုပ်ပိုးမှုအိုင်ဒီယာဝန်ဆောင်မှု
- ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းနှင့် ကွဲပြားသော ပုံနှိပ်စက်နည်းပညာ။
[ပြပွဲနှင့် နိုင်ငံတကာရှိုး]- ကုန်းလမ်းဖြင့် Canton Fair နှင့် Guangzhou နှင့် Shanghai ရှိ နိုင်ငံတကာ ထုပ်ပိုးမှုပြပွဲအချို့ကို နှစ်စဉ်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
1. သင်သည် စက်ရုံ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် 2005 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အစားအသောက်၊ လက်ဆောင်၊ အလှကုန်၊ အရုပ်စသည်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော အရည်အသွေးမြင့် သံဖြူသေတ္တာများနှင့် သံဗူးအမျိုးမျိုးတို့ကို ပြုလုပ်ရန် အထူးပြုထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် 30000 စတုရန်းမီတာရှိသော ခေတ်မီအလုပ်ရုံနှစ်ခုရှိသည်။
2. သင့်တွင်စတော့ရှိပါသလား၊ နမူနာယူလို့ရပါသလား။နမူနာယူနည်း။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများအများစုသည်စတော့ရှယ်ယာတွင်ရှိပါသည်၊ သင်နမူနာယူလိုပါက၊ သင့်အတွက်ပို့ဆောင်ခကိုစစ်ဆေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပစ္စည်း၊ အရွယ်အစား၊ အရောင်နှင့်အရေအတွက်ကိုပြောပြပါ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များအား စျေးကွက်ဖွင့်ရာတွင် ကူညီရန် MOQ နည်းပါးသော ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်လိုပါသည်။
4. မင်းရဲ့ ထုတ်လုပ်မှု ဦးဆောင်ချိန်က ဘယ်လောက်လဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် 2012 ခုနှစ်တွင် စတင်ထုတ်လုပ်သည့် အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများဖြင့် လစဉ်ထုတ်လွှတ်သည့် သံချပ်ပေါင်း6သန်းဖြင့် လစဉ် ကြိတ်စက် 30 လိုင်းဖြင့် ဝန်ထမ်း 600 ကျော်ကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ရက် 20-30 အတွင်း တိုတောင်းသော ပေးပို့ချိန်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။
5. ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဒီဇိုင်းကို သင်လုပ်နိုင်ပါသလား။သင့်ရှိပြီးသားအရာများပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏လိုဂိုကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်နည်း။
A- စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများကို လက်ခံသည်၊ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်များ၊ ပုံနှိပ်စက်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားပြီး၊ မှိုအသစ်မပြုလုပ်မီ သုံးစွဲသူများ၏ အယူအဆအပေါ် အခြေခံ၍ နည်းပညာပုံဆွဲခြင်းနှင့် 3D ပုံများပြုလုပ်ရန် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
ယခင်- အာဟာရထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ဖော်မြူလာ_နို့မှုန့်အတွက် အကွင်းလိုက်ဆွဲဗူး
နောက်တစ်ခု: လတ်ဆတ်သော ဘီယာထုပ်ပိုးရန်အတွက် အလူမီနီယမ် EOE ဖြင့် အလုံပိတ် ဘူးခွံ
125ml 250ml 500ml 1L စိတ်ကြိုက် ဆေးသုတ် Tin ထုပ်ပိုးမှု...
Tall Square အထူးထုတ် Tin Packaging & Cust...
စီဒီ အယ်လ်ဘမ် ဖြစ်ရပ်မှန်, စိတ်ကြိုက် Tin Box, အဖုံးပါသော သတ္တုသိုလှောင်အိတ်, စီဒီအစွပ်အလွတ်များ, Tin Cosmetic Containers, လက်ဖက်ခြောက်သေတ္တာ,